﻿ इटहरीको कुनामा बस्ने व्यवसायीले गरेको मतदानको परिणाम चोकका ब्यवसायीले मात्र भोग्ने ?
इटहरीको कुनामा बस्ने व्यवसायीले गरेको मतदानको परिणाम चोकका ब्यवसायीले मात्र भोग्ने ?
लोचन पौडेल विपल
इटहरी । पूर्वको व्यापारिक केन्द्र इटहरीको ताजा विषयमा निक्कै चर्चा भएको पाइन्छ ।
प्रदेश नं. १ का सबैजसो गन्तव्यको सजिलो यात्राको प्रारम्भ हुने इटहरी पूर्वकै विकासोन्मुख सहर साथै नेपाल सरकारको नमुना सहरको रुपमा परिकल्पना गर्नु यहाँका साना तथा ठूला उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, निजी तथा सरकारी कलेज, वित्तिय संस्था यसका मानक हुन सक्छन् ।
यद्यपि गुणस्तरीय अस्पताल नहुनु हाम्रो दुर्भाग्य नै हो ।
पछिल्लो समय वित्तिय क्षेत्रमा देखिएका अपराधहरुले वास्तवमै इटहरीको व्यावसायिक क्षेत्र आलोचित मात्र बनेन त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी यहाँका समग्र व्यापारी तथा व्यावसायीहरुको आवाज हो । साप्ताहिक बजार बन्दको विषय उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने अभ्यासमा निल्नु न ओकल्नु झैँ बनेको छ ।
साप्ताहिक रुपमा बिहिबार बन्द हुँदै आएको इटहरी बजारलाई शनिबार बन्द गराउनपर्छ भन्ने पक्षले बाजि मार्न सफल भएको उ.वा.संघ मतदानबाट प्राप्त परिणामलाई लागू गराउन अग्रसर छ ।
केही मिडिया साथै उवासंघले शनिबार बन्द गर्ने विषयलाई उचालिरहेका छन् । तर उवासंघको कार्यक्षेत्रको विषयमा जानकार रहन उवासंघका पदाधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै विनम्रता पूर्वक अनुरोध गर्दछु । पहिले उत्तरमा खोर्साने खापदेखि दक्षिणमा भुर्किसम्मका व्यावसायीहरुलाई समान व्यवहार तथा नियमन गर्न अनुरोध छ ।
के साप्ताहिक बजार बन्द इटहरी चोक जस्तालाई मात्र मान्ने ?
महङ्गो घर बहालको समस्या कसले हल गर्ने ?
व्यावसायिक सुरक्षण तथा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था कसले गर्ने ?
पक्कै पनि दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयहरुमा प्रशस्त छलफल गरिनुपर्छ । अत्यावश्यक सेवा अन्तरगतका औषधि पसल, होटल तथा लज जो कहिले बन्द हुँदैनन् तर बन्दका पक्षमा मतदान गर्छन्, अनि परिणाम हामीले भोग्नुपर्ने ।
तरहरा आफैंमा शक्तिशाली छ, स्वायत्त छ या छैन तर आफू अनुकुलको मत जाहेर गर्छ । खनार र लविपुर पनि उस्ता उस्तै छन् । हामी भाषणमा मात्र आमुल परिवर्तनका कुरा गर्छौं । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, व्यापारमा आएका मन्दीका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा व्यावसायीहरु धराशयी तथा पलायन हुने अवस्था अध्ययनले देखाउँछ ।
शनिबार इटहरी तथा नजिकका ग्राहकको भिड जोगबनी तिर लागोस् भन्नेहरु, साप्ताहिक शनिबारमात्र विदा पाउने सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षकलाई बजार भर्न वञ्चित गर्ने यो परिपाटि निन्दनीय छ ।
शनिबार बन्द हुँदा व्यावसायीहरुले परिवारसँग घुम्न, रमाइलो गर्न सक्छन् तर परिवारका सदस्यलाई उपचार गराउन अस्पताल लान सक्दैनन् । कुनै किसिमको कार्यालयीय काम गर्न पाउँदैनन् ।
यसबाट के तात्विक उपलब्धि होला कोही विद्वानले सुझाउन सक्नुहुन्छ ? अतः कि साविकलाई निरन्तरता दिउँ, सकिन्छ ३६५ दिन व्यावसाय गर्ने वातावरण मिलाउँ । तर साना व्यावसायी मार्ने यो निर्णय कि सच्याउँ कि लत्याउँ ! कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने मनोविज्ञान बन्यो भने भद्र अवज्ञा हुनेछ ।